Ọrụ Movie | Esi m mac
Edere ihe nkiri Steve Jobs maka onyinye 3 BAFTA
Na mbido ọnwa Disemba anyị gwara gị na ihe nkiri ikpeazụ nke na-akọ ndụ Steve Jobs, nke Michael Fassbender na-agụ na onye nọ na Spen, anọworị họpụtara maka Golden Globes anọ. O doro anya na ọ bụ ezie na ọha na eze akwadoghị ihe nkiri ahụ, ndị nkatọ na-anabata ihe nkiri banyere Ọrụ, n'okpuru edemede nke Aaron Soorkin. Abọchị ole na ole, anyị agaghị ama ma ọ bụrụ na o mechara merie otu Golden Globes nke emere ihe nkiri ahụ.
Oge a, otu ihe nkiri ahụ natara nhọpụta ọhụrụ atọ, oge a maka British BAFTA, oscars nke ihe onyonyo ndi Britain. Nhoputa ndi mmadu kwekọrọ na nke kacha mma, nke kacha mma na-akwado ihe nkiri na onye nduzi kacha mma.
Dabere na onye ọrụ iwu na ikike nke Walter Isaacson, Aaron Soorkin dere ya. Nhoputa maka onye na-akwado ihe nkiri kacha mma na-aga Kate Winslet na ọrụ Joanna Hoffman, mmekọrịta ọha na eze. Nhoputa maka omee kacha mma dakwasịrị Michael Fassbender, onye ahọpụtakwara maka Golden Globes n'otu ụdị ahụ, nke ga-alụ ọgụ Eddie Redmayne, Leonardo Dicaprio, Bryan Cranston na Matt Damon, ndị niile ahọpụtara maka otu ụdị.
Danny Boyle lebara anya na imegharị ihe nkiri ahụ na ememme dị iche iche iji mee ka ihe nkiri ahụ nwekwuo mmasị, ebe anyị niile maara, o buputala nanị ihe karịrị $ 10 nde ebe ọ bụ na mmalite ya na United States, mgbe ọ rụpụtara ihe nde 60.
Michael Fassbender natara Palm Springs Film Festival Criticism Award na nso nso a. A ga-enye onyinye BAFTA na February 14 site na m si Mac, anyị ga-agwa gị maka / ihe nrite na fim ikpeazụ banyere ndụ Steve Jobs.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Edere ihe nkiri Steve Jobs maka onyinye 3 BAFTA
Ugboro Milanese na Space Gray maka Apple Watch dị nso